Tag: fifidianan'ny mpivarotra | Martech Zone
Tag: fifidianan'ny mpivarotra
Famerenana lozisialy, torohevitra, fampitahana ary toerana hahitana (65 loharano)
Alakamisy 11 martsa 2021 Alarobia, Jona 2, 2021 Douglas Karr
Olona vitsivitsy no manontany tena hoe ahoana no ahafahako mahita karazana varotra sy fitaovana teknolojia fivarotana sy varotra marobe toa izany izay mbola tsy nahenoana azy ireo, na mety ho beta aza. Ankoatry ny fanairana efa natsangako dia misy loharanom-pahalalana marobe any mba hitadiavana fitaovana. Vao haingana aho no nizara ny lisitra nataoko tamin'i Matthew Gonzales ary nizara vitsivitsy tamin'ireo olona tiany izy ary nahatonga ahy hanomboka
Betsaka ny rafitra automatique marketing etsy sy eroa… ary maro amin'izy ireo no mamaritra ny tenany ho automatisation marketing miaraka amina ambaratongam-pahefana tena manohana azy. Na izany aza, mijery isika fa maro ny orinasa manao fahadisoana lehibe amin'ny fandaniam-bola be loatra, fotoana be loatra na fividianana vahaolana diso tanteraka. Manokana amin'ny teknolojia marketing, dia mametraka fanontaniana vitsivitsy foana izahay amin'ny fizotran'ny fifidianan'ny mpivarotra: Inona no fotoana hitanao
Ny toetra mampiavaka ny maso sy fitondran-tena tadiavin'ny CMO
Alahady, Jona 5, 2016 Douglas Karr
Ny fananana masoivoho iray dia sady mahafa-po no sarotra. Ny fototry ny zava-bitantsika rehetra ho an'ny mpanjifantsika dia mbola tianay ny manampy ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny maodelin'ny fahamatorana ara-barotra. Izy io dia ahafahantsika miasa miaraka amin'ny fanombohana sy ny mpanjifa orinasa, mampitombo ny fahafantarana azy ireo sy ny fidiram-bolany an-tserasera. Ny tsy fantatro dia ny fiovana tokony hataonay, amin'ny maha maso ivoho antsika, hijanonana eo alohan'ireo fiolahana ary hijanonana ho mpifaninana amin'ny